काठमाडौंबाट छुटेको एसी बसमा अचानक भीषण आगलागी, के छ यात्रुको अवस्था ? (हेर्नुहोस् भिडियो) — Sanchar Kendra
काठमाडौंबाट छुटेको एसी बसमा अचानक भीषण आगलागी, के छ यात्रुको अवस्था ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
डडेल्धुरामा एक गुडिरहेकाे बसमा अागलागी भएकाे छ। उग्रतारा सार्वजनिक यातायात डडेल्धुरा समितिको सुबिधा सम्पन्न एयरसस्पेन्सन बसमा आगो लाग्दा बस ध्वस्त भएको छ। डडेल्धुरा काठमाडौँ रुटमा सञ्चालन हुँदै आएको बसमा आगो लाग्दा बस पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको हो।
शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँबाट डडेल्धुराका लागि छुटेको बा ४ ख ८४९२ नम्बरको बसमा शनिबार बिहान करिब ६ बजे तिर आफैँ आगो लागेको बताइएको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तरगत बाँके जिल्लाको बासगढी नजिक अर्काे गाडी लाई ओभरट्याक गर्ने क्रममा अगाडिको चक्कामा आगलागी पछि पुरै बसमा आगो फैलिएको सोही बसमा सवार यात्रु भुवन जोशीले बताए।
एक्कासी रुपमा आफैँ आगो दन्किएपछि बस जलेर पूर्ण रुपमा नष्ट भएको छ भने यात्रुहरु सबै सकुसल रहेको उनले बताए। उग्रतारा यातायात डडेल्धुराबाट सञ्चालनमा आएको सानो चमेना गृहसहित शौचालय भएको घटाल एयर सस्पेन्सन बसमा आगलागी भएको उग्रतारा समितिले जनायो।
करिब ४५ यात्रु सवार बसमा आगलागी भए पछि यात्रु सकुसल रहे पनि यात्रुहरुको सबै सामान जलेर नष्ट भएकोे उग्रतारा सार्वजनिक यातायात समिति अध्यक्ष पदमराज जैसीले बताए। वाएर सर्ट भई आगोलागेको भन्ने बताइए पनि आगलागीको मुख्य कारण खुल्न नसकेको अध्यक्ष जोशीको भनाई छ
भिडियो सौजन्य: अनलाइन खबर
यसअघि गत माघ २४ गते काभ्रेको धुलिखेलमा पनि गुडिरहेकै अवस्थामा बसमा आगो सल्केको थियो । बनेपाबाट भकुण्डेबेंसीतर्फ जाँदै गरेको हिमाल तराई यातायातको बा ३ ख ३२७० नम्बरको बसमा सल्केको आगोले बस क्षतिग्रस्त भए पनि यात्रु भने जोगिन सफल भएका थिए ।
त्यसैगरी, ०७३ वैशाख १८ गते नेपालगञ्जबाट दाङको तुलसीपुरतर्फ जाँदै गरेको रा १ ख ६९५ नम्बरको यात्रुवाहक बसमा पनि आगो सल्केको थियो । तर आगो फैलन नपाउँदै प्रहरी तथा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका थिए । आगोले जल्दा छतमा राखिएका सात मोटरसाइकल र सामान नष्ट भएका थिए ।
याे पनी पढ्नुहाेस्
३३ किलो सुन प्रकरणमा नेकपा अण्डरलाइनका नेता पक्राउ, अरु क-कसको बढ्यो ढुकढुकी ?
एकता भएको २ हप्ता नपुग्दै ओली-प्रचण्डबिरुद्ध विद्रोहको तयारी, क-कसले छोड्दैछन् अन्डरलाइन ?